🥇 ▷ Sida loo soo celiyo noocyadii faylashaagii hore ee Mac ✅
Sida loo soo celiyo noocyadii faylashaagii hore ee Mac
Maxaa dhacaya haddii aad ka shaqeyso dukumiinti oo aad ogaato inaad xoqday? Laga yaabee inaad tirtirtay sadarrada qaar adigoon ka warqabin. Mise waxa aad qortay wax aan micno badnayn badhkii saac ee la soo dhaafay oo aad jeceshahay inaad ku laabato meeshii aad markii hore ahaan jirtay? Mac-ga, si fudud ayaad u sameyn kartaa arrintaas. Waxaa loo magacaabay noocyo, oo waa otomatik.
Isticmaalka noocyo, waxaad si fudud u heli kartaa oo aad u soo celin kartaa noocyadii hore ee dukumiinti kasta. Barnaamijyada qaar ayaa tan lagu dhex dhisay, sidaa darteed waad ku sameyn kartaa isla markaa gudaheeda barnaamijka gudahiisa. Laakiin Soo-saaraha ayaa sidoo kale taageeraya noocyo, marka waxaad ku noqon kartaa xaaladdii hore ee wax kasta.
Ku noqo noocii hore
Tilmaamahan, waxaan u adeegsan doonnaa Ulysses. Qayb ahaan waa sababta oo ah waxaan u adeegsadaa maalin kasta si aan wax ugu qoro Cult of mac, iyo qayb ahaan sababta oo ah waa heerka A + + dahab ee dib u eegista dokumentiga. Dhamaan barnaamijyadu ma wada shaqeeyaan si isku mid ah, laakiin tani waxay ku siin doontaa fikrad fiican sida wax walba u shaqeeyaan. Iyo barnaamijyada aan soo bandhigin nooca taageerada, waxaan si dhakhso ah u eegi doonnaa sida uu Finder u maareeyo.
Ulysses waxay isticmaashaa barnaamijka biraawsarka caadiga ah ee macOS.
Sawir: Bandhigga Mac
Arjigaaga, u tag bar-tilmaameedka oo dooro Fayl> Ku noqo… ama (sida kiiska Ulysses) Fayl> Baadh dhammaan noocyada. Waxaad arki doontaa aragtida kore. Hadday u muuqato mid la yaqaan, waxay u tahay sababta oo ah waxay adeegsanaysaa isla interface-ka sida Mashiinka Waqtiga, kaliya si guud ayey uga dhakhso badan tahay maadaama ay la macaamilayso faylka hadda jira.
Dhinaca bidix, waxaad haysataa nooca faylkaaga hadda ah. Dhanka midig waa xirmo nuqullo hore ah. Kuwani waa sawiro-qaadasho, oo si otomaatig ah loo qaadanayo waqtiyada. Si aad ugu dhex maratid, si fudud u guji fallaaraha falaaraha shaashadda ama guji si toos ah barta qalabka ee daaqadaha ka dhex yaal.
Tani waa waxa qeybaha ay u egyihiin TextEdit.
Noocyada faylkaaga ayaa la keydiyaa wakhtiga abuurista. Tani waxay noqon kartaa sanado. Xaaladaas, waxaad doorbidi kartaa inaad adeegsato jadwalka waqtiga midigta ee daaqadda si aad u baarto noocyadii hore. Si kastaba ha noqotee, nooca aad hadda daawaneyso waxay leedahay taariikhdeeda iyo waqtigeeda hoose ee daaqaddaada.
Si aad ugu laabato noocii hore, kaliya dhagsii soo celinta nooca aad rabto.
Nuqul / ku dhaji qaybaha
Tilmaamadayda ugu xiisaha badan ee qeybaha ayaa ah koobi iyo dhajin Dukumintiga ku jira biraawsarka biraawsarka ayaa u dhaqma sida faylal caadi ah, in kasta oo ay yihiin noocyada akhris-kaliya. Taasi micnaheedu waa inaad nuqul ka qaadan karto nuqul hore oo aad toos ugu dhajin kartid nooca aad hadda ku jirto (midka bidixda). Xitaa waad ka raadin kartaa qeybteeda, in kastoo kan hadda la soo bandhigay.
Buug gacmeed ayaa badbaadiya
Ulysses, waligaa maahan inaad keydiso dukumenti. Markaad abuuraysid xaashi cusub, wax walba waxaa gacanta ku haya arjiga. Marna maahan inaad wax kaydiso. Laakiin adigu laga yaabaa isticmaal cut-S jid-garee Ulysses, keydi nooc (amar menu waa Fayl> Keydinta nooca). Taas macnaheedu waa inaad si cad u xiri karto nooc ka hor intaadan sameynin isbeddelo waa weyn, sida marka aad ka soo qaadato qoraallada ka soo baxa tifaftirahaaga oo aad bilowdo ka shaqeynta v2.
Qaybaha mashiinka raadinta
Mashiinka waqtiga shaqeynaya.
Maxaa dhacaya haddii dalabkaagu uusan taageerin noocyo? Haddii aad adeegsato Mashiinka Waqtiga, waxaad ka heli kartaa feylka raadiyaha ka dibna dhagsii icon Mashiinka Mashiinka Waqtiga ee ku yaal bar-tilmaameedka. Mashiinka Waqtigu wuxuu la wareegayaa, oo waad u baari kartaa gadaal iyo gadaal si aad u hesho noocyo dukumiinti ah oo hore, iyo xitaa inaad soo ceshato dukumiintiyada aad tirtirtay.
Kaliya maaha xaaladaha degdegga ah.
Quruxda qaybaha ayaa kaliya maahan inaad badbaadiso shaqadii lumay. Waa inaad kaliya u baahan tahay hal nooc oo fayl ah, oo waad baari kartaa noocyadii hore wakhti kasta. Tusaale ahaan, halkii aad u abuuri lahayd dukumenti cusub qoraalada kulanka asbuuc kasta, waad isticmaali kartaa, wax walba tirtiri kartaa, oo waad bilaabi kartaa mar labaad. Markaa markii aad rabto inaad aragto qoraalada kulanka maalin cayiman laba sano ka hor, way fududahay in la helo, maxaa yeelay waa sax meesha isla qoraalkan aad had iyo jeer isticmaasho.
Warka waxaa soo saaray AMAARKA AMAANKA Xiriirka kor ku xusan, waxaan kafaala-qaadeynaa soosaaraha asalka u ah wararka annaga oo aan wax u dhimin sumcadiisa ama meeleynta websaydhka.